Warbaahinta Norway maxey ka qoreen xil ka qaadistii R.W X. A. Kheyre? - NorSom News
Warbaahinta Norway maxey ka qoreen xil ka qaadistii R.W X. A. Kheyre?
Maalintii sabtida waxay bulsho-weynta soomaaliyeed ku waabiriisteen mooshin aan horey loo shaacin oo baarlamaanka Soomaaliya ay xilkii kaga qaadeen reysulwasaarihii hore ee Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre.
Xasan Cali Kheyre oo ahaa reysulwasaarihii ugu waqtiga dheeraa taariikhda Soomaaliya ee ka danbeysay burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya, ayaa inta uusan ku biirin siyaasada Soomaaliya ahaa qof hormuud ah oo katirsan jaaliyada soomaaliyeed ee Norway.
Wuxuuna sanadkii 2001 noqday gudoomiyaha ururkii burburay ee midowgii ururada iyo jaaliyadaha soomaalida Norway(Somalisk Råd Norge), isaga oo 1993 kamid ah aas-aasayaashii ururka ardeyda soomaaliyeed ee Norway(Somalisk student forening). Wuxuuna markii danbe noqday maamulaha hey´adda gargaarka qoxootiga Norway( NRC), qeybteeda gobolka bariga Afrika iyo dalka Yemen.
Warbaahinta Norway ayaa siyaabo kala duwan uga hadashay xil ka qaadista Xasan Cali Kheyre, waxeyna intooda badan qoreen in xukuumadii uu madaxa ka ahaa Xasan Cali Kheyre ay ku guuleysan weyday sugista amniga iyo xasilinta mowjahada siyaasada is diidan ee Soomaalida dhexdeeda ah. Iyaga oo dhanka kale ku amaanay wax qabadkii iyo isbadalkii uu ka sameeyay arrimaha dhaqaalaha, iyo diiwaan-galinta iyo mushaar siinta shaqaalaha dowlada, sidoo kale dhameystirka iyo taabagalinta barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya.
Nin lagu magacaabo DR. Maxamed Gaas oo profosor ka ah jaamacada ås, oo u waramay wargeyska VG ayaa sheegay in shaqo ka ceyrinta Xasan Cali Kheyre ay aheyd qorshe uu isku soo rakibtay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo raba mudo dheereysi, isaga oo ceyrinta Kheyre laga leeyahay ujeedo ah in dib u dhaca doorashada lagu xalaaleysto.
Gaas ayaa sheegay in talaabada ceyrinta Kheyre iyo damaca mudo kororsiga ee Farmaajo ay yihiin labo wax oo isku xiran, taas oo hadii ay sii socoto ay ka dhalan karto qalalaase keeni kara gacan ka hadal ama dagaal sokeeye.
Halkan ka akhri qeybo kamid ah warbixinta ay saxaafada Norway ka qortay shaqo ka ceyrinta Xasan Cali Kheyre.
VG: Fjerner norsk-somalisk statsminister.
Nrk: Norsk-somalisk statsminister må gå
NTB: Mistillit mot Somalias «norske» statsminister
Previous articleGermany oo Giriiga kasoo qaatay qoxooti ay dad Soomaali ah kujiraan.
Next articleSarpsborg: Dhakhtarka gobolka oo furay baaritaan la xiriira wiilkii soomaaliga ah ee dilka geystay.
Removing Mr Kheyre from the office of prime minister it was big mistake and I really disappointed what president farmaajo did it’s not legitimate way the way removed and the vote 🗳 of Parliment this is corruption and injustice mr kheyre he is one of the best prime ministers I never seen he has a vission to promote this country and bring peace and security am sorry to my people and my country we are going back difficult time but I hope nothing bad will happen
Last edited 1 month ago by Mohamed maye